Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Mbụ 5:1-26
Ụmụ Ruben na ụmụ ụmụ ya (1-10)
Ụmụ Gad na ụmụ ụmụ ya (11-17)
E meriri ndị Hega (18-22)
Ọkara ebo Manase (23-26)
5 Ruben+ bụ ọkpara Izrel. Ọ bụ ya bụ ọkpara. Ma, ọ gakwuuru iko nna ya, ya na ya edinaa,*+ e nyezie ụmụ Josef nwa Izrel ihe ruuru ọkpara.+ Ọ bụ ya mere na e deghị na Ruben bụ ọkpara n’akwụkwọ e dere aha ndị ezinụlọ ha n’usoro. 2 Ọ bụ eziokwu na Juda+ kacha ụmụnne ya niile, nakwa na ọ bụ onye si n’ezinụlọ ya ga-abụ onye ndú,+ ọ bụ Josef ka e nyere ihe ruuru ọkpara. 3 Ụmụ Ruben bụ́ ọkpara Izrel bụ Henọk, Palu, Hezrọn, na Kamaị.+ 4 Joel mụrụ Shemaya, Shemaya amụọ Gọg, Gọg amụọ Shimiaị, 5 Shimiaị amụọ Maịka, Maịka amụọ Reeya, Reeya amụọ Bel, 6 Bel amụọ Beera, onye Tilgat-pilniza,+ eze Asiria, dọọrọ n’agha. Ọ bụ onyeisi ụmụ Ruben. 7 A bịa n’usoro e si dee aha ụmụnne ya n’akwụkwọ e dere aha ezinụlọ dị iche iche, Jeayel bụ onyeisi ha. Ndị ọzọ bụ Zekaraya, 8 Bila nwa Ezaz, nwa Shima, nwa Joel. Ndị ezinụlọ Bila biri malite n’Aroa+ ruo Nibo na Bel-miọn.+ 9 N’ebe ọwụwa anyanwụ, ha biri ruo ebe e si abanye n’ala ịkpa, n’akụkụ Osimiri Yufretis,+ n’ihi na anụ ụlọ ha dị nnọọ ọtụtụ n’ala Gilied.+ 10 Mgbe Sọl na-achị, ha lụsoro ndị Hega agha, meriekwa ha. Mgbe ha merichara ha, ha gaziri biri n’ụlọikwuu ha n’ala niile dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Gilied. 11 Ma ụmụ Gad biri malite na Beshan ruo Saleka.+ Ha na ụmụ Ruben gbara agbata obi. 12 Na Beshan, Joel bụ onyeisi. Shefam bụ onye nke abụọ. Jenaị na Shefat sokwa ná ndị isi. 13 Ụmụnne ha, ndị ha na ha si n’otu ọnụmara, bụ Maịkel, Meshọlam, Shiba, Joraị, Jekan, Zaya, na Iba. Ha niile dị mmadụ asaa. 14 Ndị a bụ ụmụ Abihel nwa Huraị, nwa Jeroa, nwa Gilied, nwa Maịkel, nwa Jeshishaị, nwa Jado, nwa Bọz. 15 Ehaị nwa Abdiel, nwa Gunaị, bụ onyeisi ezinụlọ ndị nna nna ha. 16 Ha biri na Gilied,+ nke dị na Beshan,+ nakwa n’ime obodo ndị dị ya nso,* nakwa n’ala niile anụmanụ ha na-ata ahịhịa na Sharọn. 17 N’oge Eze Jotam+ na-achị Juda nakwa n’oge Eze Jeroboam*+ na-achị Izrel, e debara aha ha niile n’akwụkwọ e dere aha ezinụlọ dị iche iche. 18 N’ebo Ruben, n’ebo Gad, nakwa n’ọkara ebo Manase, e nwere puku mmadụ iri anọ na anọ na narị asaa na iri isii (44,760) ndị bụ́ dike n’agha. Ha na-eji ọta na mma agha, na-ejikwa ụta.* Ha bụkwa ndị agha a zụrụ azụ. 19 Ha lụsoro ndị Hega,+ ụmụ Jitọ, ụmụ Nefish,+ na ụmụ Nodab agha. 20 Chineke nyeere ha aka n’agha ahụ, nyefeekwa ndị Hega na ndị niile ha na ha so n’aka ha. Ha rịọrọ Chineke ka o nyere ha aka n’agha ahụ, ya anụkwa arịrịọ ha maka na ha tụkwasịrị ya obi.+ 21 Ha kpụụrụ anụ ụlọ ha. Ha kpụụrụ puku kamel iri ise (50,000), narị puku atụrụ abụọ na puku iri ise (250,000), nakwa puku jakị abụọ (2,000). Ha dọkwaara otu narị puku (100,000) mmadụ* n’agha. 22 Ha gburu ọtụtụ ndị n’ihi na ezi Chineke lụụrụ ha agha.+ Ha bichiziri n’ala ha ruo mgbe a dọọrọ hanwa n’agha.+ 23 Ọkara ebo Manase+ biri n’ala ahụ malite na Beshan ruo Bel-hemọn na Sina nakwa n’Ugwu Hemọn.+ Ha dị nnọọ ọtụtụ. 24 Ndị a bụ ndị isi n’ọnụmara ha dị iche iche: Ife, Ịshaị, Iliel, Azriel, Jeremaya, Họdavaya, na Jadiel. Ha bụ ndị dike n’agha, ndị a ma ama, na ndị isi ezinụlọ ndị nna nna ha. 25 Ma, ha nupụụrụ Chineke ndị nna nna ha isi. Ha kpara àgwà ka ndị akwụna, hapụ Chineke, fewe chi ndị ala ahụ,+ ndị Chineke lara n’iyi n’ihu ha. 26 N’ihi ya, Chineke Izrel mere ka Pul, eze Asiria,+ (ya bụ, Tilgat-pilniza,+ eze Asiria), gaa dọrọ ebo Ruben, ebo Gad, na ọkara ebo Manase n’agha ma kpọga ha Hela, Hebọ, Hera, nakwa n’akụkụ osimiri Gozan,+ ha ebiri ebe ahụ ruo taa.
^ Na Hibru, “o merụrụ àkwà nna ya.”